Ukuphindwaphindwa kwesikhungo se-FAAC kwezikhiye zemoto yokulawula kude: Izindawo Zokuphepha N.3
Ukuphindwa kwesikhungo se-FAAC kwezilawuli zomsakazo i-Safety Point N.3
UKUPHEPHA NOKUZIPHATHA: Iminyaka engama-50 eyedlule besingowokuqala futhi siyaqhubeka nokuba njalo.
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-67)
Ukunemba nokunakwa ku ukuvikeleka ayisisekelo sezinsizakalo ezinikezwa Ezokuphepha n.3, Isikhungo Sokufanelekela se-FAAC a Messina. Ukusebenzisana Ukuphindwa kwezilawuli zomsakazo e Izihluthulelo, kodwa futhi nokufakwa, ukulungiswa nokulungiselelwa I-Burglar, Amasistimu we-alamu, Izinhlelo zokuphepha CC TV e Isango ezenzakalelayo.
Ukuphindaphindwa kwezilawuli kude, izilawuli kude nezikhiye zemoto: ukuphepha kuza kuqala eMessina
La ukuphindaphinda ka izilawuli ezikude zezikhiye zemoto namasango okuzenzakalelayo kungenye yezindlela eziningi zokungenelela phendukela ukuphepha kwakho futhi kwenziwa Messina dal I-FAAC Center Security Point No. 3. Umsebenzi we Ukuphindaphinda thinta ukunqunyelwa okubanzi kwe amadivaysi kagesi kanti cha: woza Izilawuli kude ngayinye amasango okuzenzakalelayo ai Izilawuli kude nge- okhiye yimuphi imoto, kuya ku ukuphindaphinda ka amagobolondo nge- okhiye yimuphi imoto kanye ne ngesithuthuthu. I-Security Point No. 3 iyi- Isikhungo Senkonzo Esifanelekayo se-FAAC Ukufakwa, Ukulungisa kanye Nosizo lwe anti-ukweba amasistimu, izinhlelo ze-alamu, ezenzakalelayo, amasango okuzenzakalelayo e Izinhlelo zokuphepha ze-CCTV I-leitmotif yokungenelela ngakunye ihlala iphephile ukuphepha kwakho nokuvikelwa kwendawo lapho izinhlelo zethu zifakiwe khona. ukuvikeleka akulona igama lethu nje kuphela: yifilosofi eqondisa wonke umsebenzi wethu ukufakwa, ukulungisa e ukuphindaphinda okhiye nokulawula umsakazo.
Ama-Gates okuzenzakalelayo ama-Gates ne-Car Key Shell Ukuphindwa: Ukuphepha eMessina isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-40
La I-FAAC imele isiqinisekiso, ukuphepha kanye nokwethembeka ezingeni likazwelonke nakwamanye amazwe emkhakheni we okuzenzakalelayo. Iphuzu lokuphepha è Isikhungo Esifanelekayo a Messina for the I-FAAC neminye imikhiqizo eminingi, kufaka phakathi U-Errebi. Inikeza ukungenelela kokufakelwa ofanelekile, ukulungiswa kanye nosizo lwe anti-ukweba amasistimu, amasango okuzenzakalelayo, izinhlelo ze-alamu e Imisakazo yeThelevishini evaliwe. Lokhu kungenelela okufanelekile, kanye nokuthengiswa kwemikhiqizo enqenqemeni, kuyenezelwa emisebenzini yokuqonda ngokucophelela ye ukuphindaphinda Izilawuli kude, Izilawuli kude, okhiye kanye amagobolondo ezimoto. Konke ukungenelela kwenziwa ngobulukhuni, isikhathi kanye namazinga aphezulu.
Ikheli: Nge-Giuseppe la Farina, 133
Ucingo: 090 2939969
Umakhala ekhukhwini: 392 2631997
Inombolo ye-VAT: 02894340831